घरमा कहिल्यै अशान्ति र दु:ख हुदैँन ! यी ७ कुरामा सधैँ ध्यान दिनुहोस्… – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > घरमा कहिल्यै अशान्ति र दु:ख हुदैँन ! यी ७ कुरामा सधैँ ध्यान दिनुहोस्…
admin June 5, 2020 June 5, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति 0
बास्तु शास्त्रका अनुसार विभिन्न कारणले घरमा केहि न केहि नराम्रो भइरहेको हुन्छ । बास्तु नमिल्दा घर परिवारमा अशान्ति भइरहेको पाइन्छ । यदि घरमा बास्तु मिल्ने हो भने त्यो घरमा अशान्ति र दुख कहिल्यै हुदैँन । बास्तुले घरमा सकारात्मक र नकारात्मक उर्जा दिने गर्दछ ।
घरमा नराम्रो उर्जा पैदा गर्ने विभिन्न कारक तत्वहरुलाई बास्तुले निष्किृय तुल्याउँछ त्यसैले घरमा बास्तुलाई मिलाउनु अत्यन्तै जरुरी छ ।
नि’र्दयी बाबु आमा : बि’रामी छोरा छा’डेर अ’र्कैसंग हिडिन, बाबुले छा’डेपछि, लिटो खाएर बाँ’च्दैछन् (भिडियो सहित)